Mivelona amin’ny mozika : Mbola tsy mieritreritra ny hanao politika i Stéphanie -
AccueilVaovao SamihafaMivelona amin’ny mozika : Mbola tsy mieritreritra ny hanao politika i Stéphanie
Andriambavilanitra mpanakanto manana ny lazany amin’izao fotoana. Mbola miaina sy mivelona amin’ny mozika amin’izao fotoana ka mbola tsy mieritreritra ny hanao politika i Stéphanie. Ho an’ity mpanakanto fantatra tamin’ilay hira « Tsy misy rohirohy » ity, dia tsy ataotao foana ny fanaovana politika fa misy fototra sy fara-faharatsiny tsy maintsy nianarana sy nohalalinina. Tsy manakana ary tsy manome tsiny ireo mpanakanto hafa miroso amin’izany lalana izany anefa izy. Na izany aza, dia tsy miombon-kevitra amin’ireo mpanakanto miroso lalina amin’ny fanaovana politika izy, ka misalotra sy mitonon-tena ho solontenan’ny mpanakanto malagasy rehetra. « Toa ny olom-pirenena rehetra ny mpanakanto manana ny safidiny », hoy ny fanazavany. « Tsy voatery ho resa-bola foana no hiarahana amin’ny kandida iray, fa tsara ihany koa ny mijery ny hevitra sy ny zava-bitan’izy ireny teo amin’ny fiarahamonina sy ny fiainam-pirenena », hoy indray izy raha nanontaniana mikasika ny anjara birikiny amin’ny fanaovana fampisehoana miaraka amin’ireo kandida, ao anatin’izao fotoana hisian’ny fifidianana manangasanga izao. « Asa toa ny asa rehetra no atao, ary mifantoka amin’ny fanentanana izahay », hoy hatrany izy.
Eo amin’ny fiainana andavanandro indray dia nanamarika ity mpanakanto ity fa tafiditra amin’ny fikasany amin’ity taona ity ny hiditra amin’izay eo amin’ny sehatry ny fanambadiana. Eo am-piandrasana izany anefa dia mitohy ny famokarana hira vaovao, ary hisy vokatra vaovao atolony indray ny mpankafy amin’ity taona ity.